Kuburitswa Kwekubatana Kwezvinhu: Mamwe malink ari pawebhusaiti ino akabatana zvinongedzo. Izvi zvinoreva kuti kana ukadzvanya pane chinongedzo uye wotenga chinhu, muridzi wewebhusaiti ino anogashira komisheni yakabatana. Zvisinei, muridzi wewebhusaiti ino anongokurudzira zvigadzirwa kana masevhisi anozowedzera kukosha kune vaverengi. Muridzi wewebhusaiti ino ari kuburitsa izvi zvinoenderana neFederal Trade Commission's 16 CFR, Chikamu 255: Guides Nezve Mashandisiro Ekupedzisira uye Testimonials mukushambadzira.
Iyi webhusaiti inogona kugamuchira mafomu ekushambadzira kwemari, kutsigirwa, kuiswa kwakabhadharwa kana mamwe maitiro emuripo.
Muripo unogashirwa unogona kupesvedzera kushambadza zvirimo, misoro kana zvinyorwa zvakaitwa muwebhusaiti ino. Izvo zvemukati, nzvimbo yekushambadzira kana positi inogona kusagara ichionekwa seyakabhadharwa kana inotsigirwa zvemukati.
Muridzi (s) wewebhusaiti ino anogona kubhadharwa kuti ape maonero pane zvigadzirwa, masevhisi, mawebhusaiti uye nezvimwe zvakasiyana siyana. Kunyangwe varidzi vewebhusaiti ino vachiwana muripo wezvatinotumira kana kushambadza, isu tinogara tichipa maonero edu echokwadi, zvatinowana, zvatinotenda, kana zviitiko pane izvo zvinyorwa kana zvigadzirwa. Maonero nemafungiro akataurwa pawebhusaiti ino ndeemunyori chete. Chero chinodairwa chigadzirwa, nhamba, quote kana chimwe chinomiririra nezve chigadzirwa kana sevhisi zvinofanirwa kusimbiswa nemugadziri, mupi kana bato riri mubvunzo.
Webhusaiti iyi haina chero zvirimo zvinogona kuendesa kupokana kwemafaro.
Amazon Associates Chirongwa Disclaimer
bikehike.org inopinda muAmazon Services LLC Associates Chirongwa, chirongwa chekushambadzira chakagadzirirwa kupa nzira dzesaiti kuwana mari yekushambadzira nekushambadzira uye kubatanidza neAmazon.com. Amazon, Amazon logo, AmazonSupply, uye AmazonSupply logo zviratidzo zveAmazon.com, Inc. kana masangano ayo.
Zvinyorwa zveBlog zvinogona kunge zvine Amazon affiliate links, zvichireva, kana ukadzvanya nekutenga izvozvi kana kusaina kuchirongwa cheAmazon, bikehike.org inogona kuwana komisheni. Izvi hazvina muripo wakawedzerwa kwauri.